Vaovao - Ny fahombiazana sy ny tombony azo avy amin'ny fonosana fantsona plastika PE
Ny fahombiazana sy ny tombony azo avy amin'ny fonosana fantsona plastika PE
Ny fahombiazana sy ny tombony azo avy amin'ny Fantsona plastika PE fonosana
Ny fahombiazana sy ny tombony azo avy amin'ny Fantsona plastika PE fonosana: bobongolo ambony manify, soratra ambony manify, embossing soroka, famafazana anatiny maro, fanontana loko ary teknolojia hafa. Fonosana plastika vita amin'ny plastika PE vokatra an'ny orinasa 0ur Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd.. eFA
Izy io dia azo antoka, madio ara-pahasalamana, tsy harafesina, tsara bika, mora ampiasaina ary sariaka amin'ny tontolo iainana. Fantsona plastika PE ny fonosana dia be mpampiasa amin'ny fanafody, kosmetika, akora simika isan'andro, sakafo ary indostria hafa.
Misy karazany maro ny fonosana fantsona plastika PE, indrindra ny fanatsarana tarehy vehivavy. Miaraka amin'ny fifaninanana mahery vaika mihombo eo amin'ny tsenan'ny kosmetika dia manandrana manitatra ny varotra vokariny ny orinasa mpivarotra hosodoko sy tarehy isan-karazany.
Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd. nanao ezaka lehibe tamin'ny famonosana sy fampiroboroboana kosmetika.
Ny fiasa sy ny asan'ny Fantsona plastika PEmiha manadio hatrany ny fonosana, ary miha mihaingo makiazy feno endrika, miharihary ny tsy fitovizan'ny naoty, ary manaitra ny endrika fonosana; Mandritra izany fotoana izany, mba hampahafantarana bebe kokoa ny tena
Ho an'ny vokatra vokariny, Fonosana RB manasokajy sy manangona kosmetika amin'ny fomba hafa mba hifanaraka fonosana avana shanghai toetra mampiavaka azy manokana.
Ny fonosana fantsom-bozaka vita amin'ny plastika PE dia manana anarana maro sy asa samy hafa, saingy arakaraka ny endriny sy ny fahaiza-manamboatra fonosana azy dia misy ireto sokajy manaraka ireto: kosmetika matevina, kosmetika matevina (vovoka), kosmetika misy menaka sy lotion, makiazy fanosotra, sns.
1. Ny fonosana fantsona plastika PE dia manala ny ampahany amin'ny rivotra (oxygen) ao anaty fitoeram-pamonosana, izay afaka misoroka tsara ny fahasimban'ny sakafo.
2. Fonosana fantsona plastika PE mampiasa fitaovana fonosana misy fananana misakana tsara (fahateren'ny rivotra), teknolojia famehezana ary fepetra hentitra, izay afaka misoroka tsara ny fifanakalozana fitaovana ao anaty fonosana ary hisorohana ny fihenan'ny lanja amin'ny sakafo
Ny fahaverezan'ny tsirony sy ny fisorohana ny fandotoana faharoa.
3. Ny gazy ao anaty fitoeran-javatra fonosana fantsom-bozaka PE dia nesorina, izay manafaingana ny famindrana hafanana, afaka manatsara ny fahombiazan'ny fanamorana ny hafanana, ary manalavitra ny fanitarana ny gazy mandritra ny fizotran'ny fanamorana ny hafanana mba hahatonga ny fitoeran'entana ho vaky
Ao amin'ny indostrian'ny sakafo, PE fantsona plastikany fonosana dia be mpampiasa, toy ny tongotra akoho, hena, saosisy sns; ny fantsom-panafody dia ampiasaina amin'ny pickles, vokatra soja, voankazo voatahiry ary vokatra pickles hafa. Plastika PE. Ny androm-piainan'ny sakafo amin'ny fonosana fantsom-panafody dia manitatra ny androm-piainan'ny sakafo.
Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd. no mpanamboatra, fonosana avana Shanghai Manome fonosana kosmetika tokana.
Raha tianao ny vokatray dia afaka mifandray aminay ianao,